BRJ5169 Baby Electric Car ,3 -6years
Baby Electric Car လေးက ဘီးလေးလုံးစလုံးမောင်းနှင်နိုင်ပြီး ဘရိတ်ပါသောကလေးပျှမ်းမအသက် 3နှစ်မှ 6နှစ်ထိစီးနိုင်သော လျှပ်စစ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ကားမောင်းချင်သောကလေးတို့အတွက် အလွန်လှပပြီးအရောင်လေးတွေနဲ့ မို့ကလေးတို့ကြိုက်နှစ်သက်မှာသေချာပါတယ်။ ဘေးတံခါး ၂ ချပ်စလုံးကိုလဲအဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်လို့ရပြီး ရှေ့မီးနှင့် ကားပတ်လည်တွင် အလှဆင်မီးလေးများပါဝင်တာကြောင့် သားသားမီးမီးလေးတွေ အကြိုက်ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတို့မောင်းနှင်သည့်အခါမှာလဲ အရှိန်အရမ်းများသွားသည့်အခါ အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်3Speed Adjustment and Emergency Stop Botton လည်းပါဝင်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်ကားလေးတွင် စိတ်ချရတဲ့ခါးပတ်နှင့်ထိုင်ခုံလေးကြောင့် ကလေးတို့ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်နိုင်သလို ဖေဖေမေမေတို့ကလဲ Remote ဖြင့် Control လုပ်လို့ရပါတယ်။ Baby Electric Car လေးကUSB Charging စနစ်နဲ့သွားသောကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
-BRJ5169 Baby Electric Car
-Dimensionး အလျား-56cm,အရှည် -102cm,အမြင့်49cm ရှိခြင်း
-ပျမ်းမျှအသက်3-6နှစ်ထိ စီးနိုင်ခြင်း
-Double Door Design,Opening Doors တံခါးနှစ်ဘက်စလုံးအဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်ခြင်း
-Multi-function Steering Wheelဖြစ်ခြင်း
-အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန်3Speed Adjustment and Emergency Stop Botton ပါဝင်ခြင်း
-Remote and Manual controlဖြစ်ခြင်း
-Material: PP. PE. Plasticဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း
- Safety Seat Belt ပါရှိခြင်း
- LED Lampများပါရှိခြင်း
-USB Charging စနစ်ဖြစ်ခြင်း
tracker id: 1 #14012
Baby Hello Kitty Car
Baby Goat Car
B1110 Electric Bike
Electric3Wheels Bike 160.hl
66,000 Ks Sold Out
Electric Motor Bike4Wheels 198.hl
BLM1688 Electric Car with Handle
77,300 Ks Sold Out
HLW2188 Electric Car